ယေရှု၏နာမတော် | The Names of Jesus Title | Real Conversion
“အကြောင်းမူကား ငါတို့အဖို့ သူငယ်ကိုဖွားမြင်၏။ ငါတို့အား သားကို သနားတော်မူ၏။ ထိုသူသည် အုပ်စိုးခြင်းအာဏာစက်ရှိလိမ့်မည်။ နာမတော် မူကား၊ အံ့ဩဖွယ် တိုင်ပင်ဘက်၊ တန်ခိုးကြီးသောဘုရားသခင်၊ ထာ၀ရအဘ ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကို ခံတော်မူလိမ့်မည်။” (ဟေရှာယ ၉း၆)
ဒေါက်တာလူးဝစ်ထိုဘောက်သည် (၁၈၈၉-၁၈၇၆) ခုနှစ်တုန်းက The great Church of the Open Door, အသင်းတော်၏သင်းအုပ်ဆရာကြီးတစ်ပါးဖြစ်သည်။ ၎င်းအသင်းတော်သည် ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်နှင့် ကပ်ရပ်ဖြစ်ပြီး လော့အိန်ဂျယ်လိတ် မြို့လယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းတော်၏မြောက်ဘက် ၈ဘလောက်အလိုတွင် တည်ရှိပါ သည်။ ထိုအသင်းတော်ကို ဒေါက်တာအာရ်.အေတိုရီက တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အသင်းသားပေါင်း ၅၀၀၀ ရှိသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် အသင်းသားလျော့နည်းလာပြီး ဒေါက်တာထိုဘောက်သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်လာချိန်တွင် အသင်းသားရာဂဏန်းသာ ရှိလာလေတော့သည်။ ကြီးမားသောစုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်း အသင်းတော်၌ ရှိလင့်ကစား ထိုဆရာသည် အသင်းတော်တိုးတက်အောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့၏။ အသင်းတော်အဆောက် အအုံကိုလည်း အောင်မြင်စွာဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့၏။ အစိုးရထံ၌ ပေါင်နှံထားသော အဆောက်အအုံကို ရွေးနိုင်ခဲ့၏။ မြောက်များစွာသော အသင်းသားအသစ်တို့ကိုလည်း အသင်းဝင်စေတော်မူခဲ့၏။ ထိုဆရာကြီး အနားယူပြီးသောအခါ ဒေါက်တာ ဂျေ.ဗန်နုန်မက္ကီးက ၎င်းအသင်းတော်ကို ဦးဆောင်ခဲ့ပါသည်။ အသင်းတော်ကို ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုတွေနှင့် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြသော ဒေါက်တာအမ်အာရ်ဒီဟမ်း၊ ဒေါက်တာဝီလ်ဘာအမ်စမစ်၊ ဒေါက်တာအာရ်ဂျီလီး၊ ဒေါက်တာဂျီဗျူချာ့ပ်ဗက်စ်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ထိုင်ဝမ်သို့သာသနာပြုခရီးကို သွားရောက်ခဲ့၍ ကျော်ကြားခဲ့သော ဒေါက်တာဒက်စ်ဟီလီးတို့အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်ကြားခဲ့ဖူးပါသည်။ သို့သော် ဒေါက်တာထိုဘောက်သည် အသင်းတော်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကြားက အသင်းတော်ကြီးကို ကြီးထွားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ရာချီသောပြည်ပသာသနာပြုဆရာများနှင့် ပြည်တွင်း အမှုတော်ဆောင်များကို ထောက်ပံ့ခဲ့သောဆရာကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာ ထိုဘောက် ၁၉၃၀နှင့်၁၉၄၀ကြား ရေဒီယိုရေလှိုင်းသံဖြင့် တရားဒေသနာ ဟောကြား ရာတွင် ကျော်ကြားသောသူဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဆရာကြီးကို ကျွန်ုပ်သိခဲ့ပါသည်။ ဆရာကြီးကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်တွင် သူ၏ဇနီးသည် ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်၌ တရားဒေသနာတော်များကို ခွန်းအားပေးဟောကြားခဲ့သေး၏။ ဒေါက်တာထိုဘောက်က အောက်ပါအတိုင်း ဟောကြားခဲ့ပါသည်။
တစ်ခုတည်းသော ခရစ္စမတ်(စ်)သီချင်း သံစဉ်ချို ကျွန်ုပ်တို့ နားထေင်ကြရမည်မှာ မေရှိယဘုရား ဖွားမြင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော သီးချင်းခေါင်းစဉ်သည် “ငါတို့အဖို့ သူငယ်တော်ကို ဖွားမြင်၏”ဟူသော ဓမ္မသီချင်းပင်ဖြစ်၏။ ထိုခေါင်းစဉ်ကို တွေးကြည့်သောအခါ သံစဉ်ချိုသည် နားထဲစီးဆင်းလေတော့၏။
“အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့အဖို့ သူငယ်တော်ကို ဖွားမြင်၏။ ငါတို့အား သားကို သနားတော်မူ၏။ ထိုသူသည် အုပ်စိုးခြင်းအာဏာ စက်ရှိလိမ့်မည်။ နာမတော်မူကား အံ့ဩဖွယ်တိုင်ပင်ဖက်၊ တန်ခိုး ကြီးသောဘုရားသခင်၊ ထာ၀ရအဘ ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဟု ခေါ်ဝေါ် သမုတ်ခြင်းကို ခံတော်မူလိမ့်မည်” (ဟေရှာယ ၉း၆)။
“ငါတို့အဖို့ သူငယ်တော်ကိုဖွားမြင်၏” ဟူသည်ကား အံ့ဩဖွယ်” ဟာလေလုယာ ချီးမွမ်းဖွယ်”ဖြစ်ပြီး၊ မြင့်မြတ်သော၊ တန်ခိုးကြီးသော၊ ကြီးမြတ်ခြင်းပင် ဖြစ်သတည်းဍ လက်စွဲခေါင်းစဉ်ဖြစ်သော မေရှိယကို ခရစ်ယာန် တို့သည် သက်ဝင်ကိုးကွယ်ရကြပြီး၊ နုတ်ထွက်စကား “မေရှိယ”သခင်သည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတော်မြတ်၌ ကယ်တင်ရှင်နှင့် ဘုရင်တကာတို့၏ဘုရင်ဖြစ် မည်ကို ကျမ်းပြုထား၏။ ထိုသခင်သည် ပြင်းထန်စွာသေခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ ကောင်းကင်ဘုံသို့ တက်ကြွခြင်း၊ နောက်ထပ်ပြန်လည်၍ မြေကြီးပေါ်သို့ ကြွလာလိမ့်မည်ဟု ကျမ်းပြုထားပါသည်။ “မေရှိယသခင်” ဖြစ်ခြင်းကို အသေးစိတ် ဖတ်ကြည့်သော် သခင်၏အတတ်ပညာ အသိပညာကိုသာ ရည်ညွှန်း ခြင်းမဟုတ် ထိုသခင်၏နာမတော်သည် အံ့ဩဖွယ် တိုင်ပင်ဘက်၊ တန်ခိုးကြီးသောဘုရားသခင်၊ ထာ၀ရအဘ ငြိမ်သက်ခြင်း၏ အရှင်”ဟူ၍ ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။
(Louis T. Talbot, D.D., '”The Names of our Lord”).
သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ ယေရှုဟူ၍ သိသာထင်ရှားစွာ ဖေါ်ပြထားပါသည်။ နောက်ပြီး သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ ကယ်တင်ရှင်၊ ခရစ်တော်၊ ဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်၊ ဧမာနွေလ၊ ဘုရားသခင်၏သားတော်၊ လူသား၊ နုတ်ကပတ်တော်၊ သန့်ရှင်းသူ၊ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်သူ၊ ရှိလော၊ ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်၊ ကောင်းသောသိုးထိန်း၊ နာဇရက်မြို့သား၊ လက်သမား၊ ယေဟောဝါဘုရား၏ကျွန်၊ ရှရုန်နှင်းဆီး၊ လေလီပန်းပွင့်၊ ကာလအစဉ် အစိုးပိုင်သောသူဟူ၍ ရေးသားဖေါ်ပြထားပါသည်။ သို့ပါသော်လည်း ပရောဖက်ဟေရှာယ မိန့်ကြားထားသော နာမတော်ထက် သာလွန်သော နာမမရှိနိုင်ပေ။ မိန့်တော်မူသည်ကား အံ့ဩဖွယ်၊ တိုင်ပင်ဘက်၊ တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်၊ ထာ၀ရအဘငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဟူ၍ မိန့်တော်မူထားပါသည်။ ယနေ့ည ထိုနာမတော် အကြောင်းကို အနည်းငယ် အချိန်ယူပြီး စဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့။
၁။	ပထမ၊ နာမတော်ကား အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်၏။
စပါဂျန်ပြောကြားသည့်အတိုင်း၊ ယေရှုသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကပင် အံ့ဩဖွယ် ကောင်းသော ဘုရားဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သူ၏ထာ၀ရဖြစ်တည်ခြင်းကို စဉ်းစား ကြည့်ပါ။ ကမ္ဘာဦးမတည်မရှိခင်ကတည်းက ယေရှုသည် ခမည်းတော်ဘုရား၏ အချစ်ရဆုံးသောသူဖြစ်ခဲ့၏။ ထို့အတူ ခမည်းတော်ကို ချစ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ “ချစ်မြတ် နိုးသူ”ဟူ၍ ခေါ်စိုးခြင်းသည် ဖန်ဆင်းခံမဟုတ်ကြောင်း ပြသနေသည်။ ထာ၀ရ ဖြစ်တည်ခြင်း အတူတူပင်ဖြစ်ပြီး “ဘုရားဖြစ်ခြင်း အတူတူပင်”ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသဘောသဘာ၀ တူညီခြင်းဖြစ်၏။ ဗက်လင်မြို့နွားတင်းကုတ်၌ မွေးဖွား လာသောလူသားကို ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားကြည့်သော် အံ့ဩဖွယ်ကလေးလေး ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူအစဉ်ရှိနေသော ဧမာနွေလဘုရားပင်မဟုတ်ပါလားဍ မြေကြီးပေါ် အသက်ရှင်စဉ် ကတည်းကပင် ကိုယ်တော်၏အသက်တာဘ၀သည် အံ့ဩစရာ များစွာရှိနေသည် မဟုတ်ပါလား၊ နာဇရက်မြို့သားယေရှုသည် ကောင်းကင်ဘုံအရှင် မဟုတ်ပါလား၊ သို့တိုင်အောင် ကိုယ်တော်သည် ဆင်းရဲခြင်း၊ အထင်အမြင်သေးခံရခြင်း၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက် ခံရခြင်းနှင့် အသေခံသည့်တိုင်အောင် အသက်တာတစ်ခုလုံးကို ဆက်ကပ်အပ်နှံခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား။ ကိုယ်တော်ပြုခဲ့သည့် အသေးစိတ်အကြောင်း အရာကို နားမလည်နိုင်သော်လည်း ကိုယ်တော်ကိုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ် ချစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောအပြစ်သားကို ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ဖို့ရန်၊ နာကျင်စွာထိုးနှက်ခြင်း၊ အသေ သတ်ခြင်း ကိုခံတော်မူသည့်အတွက် နာမတော်ကိုအစဉ်ချီးမွမ်းပါမည်။ ကိုယ်တော်၏ နာမတော်အစဉ်အံ့ဩခြင်းရှိပါစေသောဍ
ကားတိုင်ပေါ်ကိုယ်တော်အသေသတ်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့သိရှိခဲ့ရပါသည်။ သင့်ခန္ဓာ ကိုယ်ကို ကားတိုင်ပေါ်အသေခံရမှာဖြစ်ပြီး သင့်နေရာ၌ ကိုယ်တော် အသေခံပေးသည်ကို တွေးကြည့်ပါ။ သင့်ကိုယ်စား ခြေ၊ လက်၌်သံမှိုဖြင့်စွဲထားခြင်း ခံရသည်ကို တွေးကြည့် ပါ။ကိုယ်တော်၏အသွေးယိုစီးခြင်း၊ နာကျင်စွာထိုးနှက်ခြင်းနှင့် ဆူးဦးရစ်ကို ဆောင်း စေကြသည်ကို တွေးကြည့်ပါ။ ကောင်းကင်ဘုန်းစည်းစိမ်ကို စွန့်လွတ်ပြီး ကျွန်ုပ်အတွက် ထိုသို့အသေခံသွားသည်ကို စဉ်းစားကြည့်သော် အံ့ဩဖွယ် အမှန်ပင်ဖြစ်သည် မဟုတ် ပါလား ဍ ယေရှုအဖို့ သင်ဝေဒနာခံစားခဲ့ပါသလား ၊ ၊ သင်၊ယေရှု ဘုရားကို ချစ်ပါသလား၊ အနှိုင်းမဲ့မေတာ ၊တုနှိုင်းဖွယ်မရှိ၊ ယရှုသင့်ကို ချစ်နေပါ သည်။တုနှိုင်းဖွယ်မရှိ တန်ခိုးတော်အားဖြင့် သင့်ကို ခမည်းတော်ဘုရား၏ အမျက်ဒေါသမှ ကယ်ယူခဲ့ပါသည်။ တုနှိုင်းဖွယ်မရှိ သနားခြင်း ဂရုဏာတော်ဖြင့် အပယ်ငရဲမှ ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်တော်မူခဲ့ပါသည်။ “နာမတော်အား အံ့ဩဖွယ်” ပင်ဖြစ်ပါသည်။
သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသည်ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ခမည်းတော် ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်အား ငရဲ၌ချန်မထားခဲ့ပါ။ ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲသော နေရာ၌ ကိုယ်တော်အား ခမည်းတော်အစဉ်မထားခဲ့ပါ။ ကိုယ်တော်သည် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါသည်။ ခမည်းတော်သည် ယေရှုအားပတ်ရစ်ထားသော ပိတ်ဖြူSမှ ဖြည်ပေးခဲ့ပြီး ပိတ်ထားသော သချိုင်းဂူကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့၏။ နံနက်အာရုဏ် တက်ချိန်တွင် ယေရှုသည် သချိုင်းတော်မှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့J ပြီးဖြစ်သည်။ “နာမတော်ကား အံ့ဩဖွယ်” ပင်ဖြစ်၏။
ယခုတွင်ကိုယ်တော်သည် ခမည်တော်ထံပါသို့ တက်ကြွခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ကိုယ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်နေသည်ကိုမျှော်ကြည့်ခဲ့ကြရ၏။နောင်တွင်တစ်ဖန်ပြန်လည်၍ ဤလောကသို့ ကိုယ်တော်သည် မိုးတိမ်စီးလျှက် ပြန်လည် ဆင်းသက် ကြွလာမည်ဟူ၍ ကောင်းကင်တမန်ဆို၏။”နာမတော်ကားအံ့ဩဖွယ်” ပင်ဖြစ်၏။
၂။	ဒုတိယ၊ နာမတော်ကား တိုင်ပင်ဘက် ဖြစ်၏။
ကိုယ်တော်သည် ဤလောက၌ရှိစဉ်အခါ အနည်းငယ်သောသူတို့သည်သာလျှင် ကိုယ်တော်၏စကားတော်ကို နာခံခဲ့ကြ၏။ ယခုတွင်လည်း ကိုယ်တော်၏လူတို့အား ဤလောက၌ရှိသော လူတို့သည် မုန်းတီးလျှက်ရှိကြ၏။ ကိုယ်တော်ချစ်သော ကျွန်ုပ်တို့ ပင်လျှင် ကိုယ်တော်၏လူတို့ကို မေတ္တာထားလျှက် စောင့်ရှောက်ဖို့ မလိုလားကြချေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုယ်မိမိချစ်ကြ၏၊ သည်းခံခြင်းစိတ်မရှိကြချေ။ “ကျွန်ုပ်တို့အား ကောင်းမှုပြုသောသူတို့ကို” မေ့aမေ့လျော့လျော့နေတတ်ကြ၏။
ကိုယ်တော်တစ်ဖန်ဆင်းကြွလာသောအခါ ထိုသို့ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပါ။ ထိုအခါ လူအပေါင်းတို့က ကိုယ်တော်အား “တိုင်ပင်ဘက်”ဟူ၍ခေါ်ကြလိမ့်မည်။ ဒါဝိတ်၏ရာဇပလ္လင်ပေါ်၌ ထိုင်နေတော်မူသောအခါ လူအပေါင်းတို့သည် ကိုယ်တော် ကိုသာ ရှာဖွေကြမည်ဟူ၍ သူ၏နှုတ်ထွက်စကားကို နာခံကြလိမ့်မည်။ ဘုန်းတန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံသော နေ့တည်းဟူသော ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားမင်းကြီး၊ ဘုရင်တကာတို့၏ဘုရား ခရစ်တော်သည် စိုးစံတော်မူမည်။ ထိုအခါ တစ်ကမ္ဘာလုံး၏ တိုင်ပင်ရာသည် ကိုယ်တော်သာလျှင် ဖြစ်တော်မူမည်။ ဒေါက်တာဝေါလ်သီကုံးရေးသားသကဲ့သို့
(၁၆၇၄-၁၇၄၈ ဒေါက်တာဣဇက်ဝပ်တ်သီကုံးသော “ယေရှုစိုးစံ”)
၃။	တတိယ၊ နာမတော်ကား တန်ခိုးကြီးသောဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူ၏။
ယနေ့တွင် လူသားတို့သည် ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရသော ကိုယ်တော်၏ နာမတော်ကို မခေါ်ကြရသေးပါ။ သင်တို့ကို ကောလိပ်ပညာသင်ကြားပေးသော ပါမောက္ခက ကိုယ်တော်အားလမ်းလွှဲစေသော အရူးဟူ၍ခေါ်ခဲ့၏။ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့က ကိုယ်တော်အား”ဗလအေမေ”ဟူ၍ခေါ်ခဲ့ကြ၏။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့က ကိုယ်တော်အား ပရောဖက် တစ်ပါးဟူ၍ ခေါ်ခဲ့ကြ၏။ ယေဟောဝါအသင်းတို့က ကိုယ်တော်အား “ဖန်ဆင်းခံသတ္တဝါ” ဟူ၍ခေါ်တွင်ကြ၏။ သို့သော် နှုတ်ကပတော်၌ မိန့်တော်မူ သည်ကား “တန်ခိုးကြီးသောဘုရားသခင်” ဟူ၍ ခေါ်ဆိုထားပါသည်။ ဟာလေလုယာဍဍဍ ကိုယ်တော်သည် တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူသည်။ သုံးပါးတစ်ဆူကဲ့သို့ ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်သည်။ဍ ကမ္ဘာမြေကြီးနှင့် ကောင်းကင်ဘုံဝဂ်ဝယ် ရှိသမျှ သောအရာများကို ကိုယ်တော်ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ပါသည်။ ယေရှုဘုရား၏ နာမတော် သည်ကား “တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်” ဖြစ်တော်မူ၏ဍ
“တန်ခိုးကြီးသော” အံဩစရာစကားတစ်ခွန်းဍ ကိုယ်တော်သည် အရာခပ်သိမ်း၏ မူလအစ တန်ခိုးရှိသမျှထက် ကြီးမြတ်သောတန်ခိုး ဘုန်းတော်နှင့် တန်ခိုးကြီးခြင်းသည် ကိုယ်တော်၌ရှိသည်။ ခရစ်တော်ဘုရား၏ တန်ခိုးတော်ဖြင့် ဤလောကကို အသက်ရှင် လှုပ်ရှားစေ၏။ ကိုယ်တော်၏ သံတော်ဖြင့် ၀ရုန်းသုန်းကားဖြစ်နေသော အခြေအနေ အမှောင်မှအလင်းကို၎င်း၊ သေခြင်းမှအစဉ်ထာ၀ရအသက်ရှင်ခြင်းကို၎င်း၊ ပေးစွမ်း နိုင်ခဲ့၏ဍ ခရစ်တော်တန်ခိုးဖြင့် သက်ရှိသက်မဲ့အရာရှိသမျှ မိမိကိုငန်းကိုယ်တာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ ပန်းပွင့်တိုင်း အပွင့်ပွင့်ကြ၏။ ငှက်တိုင်းသော်၎င်း သစ်ပင် တိုင်းသော်၎င်း တောင်ထိပ်သို့သော်၎င်း ချိုင့်ဝှမ်းတို့သော်၎င်း၊ မိုးကြိုးပစ် လျှပ်ပျက် ခြင်းသော်၎င်း၊ အလင်းတန်ခိုးအားလုံးသည် ခရစ်တော်၏မဟာတန်ခိုးကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာရခြင်းဖြစ်၏။ဍ နာမတော်သည်ကား အံ့ဩဖွယ်၊တိုင်ပင်ဘက်၊ တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင် ဖြစ်သတည်းဍ
၄။	စတုတ္ထ၊ နာမတော်ကား ထာ၀ရအဘဖြစ်တော်မူ၏။
နာမတော်သည်ကား နက်နဲသောကြောင့် ရှင်းပြဖို့ ကျွန်ုပ်မတတ်နိုင်ချေ။ ထို့ကြောင့် တရားဟောမင်းသား စပါဂျန်ကို ရိုသေလေးစားလျှက်ရှိပါသည်။ စပါကျန် ဟောကြားခဲ့သည်မှာ “ယေရှုသည် ဤလောက၌ ဘုရားဖြစ်ခြင်းသည် ခမည်းတော်အရာ၌မဟုတ် သားတော်ပင်ဖြစ်၏” ဟူ၍ ဟောကြားခဲ့ပါသည်။ ရှုပ်ထွေးမှုကို သတိရှိလျှက် နားလည်ကြစို့ဍ သားတော်သည် ခမည်းတော်မဟုတ်ချေ။ ခမည်းတော်သည် လည်းသားတော်မဟုတ်နိုင်ချေ။ အသေအချာယုံကြည်အသက်ရှင်စေဖို့ လေ့လာသိရှိဖို့ လိုပေသည်။ ခမည်းတော်သည် သားတော်မဟုတ်ပါ။ သားတော် သည်လည်း ခမည်းတော် မဟုတ်ချေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်ထားသော ကျမ်းပိုဒ် သည်ကား ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါး ဖြစ်ခြင်းနှင့် ရာထူးရာခံ စက်ဆက်မှုကိုမဖေါ်ပြပဲ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ နှင့်ဆက်စပ်လျှက် ရှိသည်ကို ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သာ “ထာ၀ရအဘ” ဖြစ်တော်မူသည်။ (C. H. Spurgeon, “'His name – The Everlasting Father”).
ကိုယ်တော်သည် အစဉ်ထာ၀ရ အသက်ရှင်တော်မူ၏။ “ယနေ့၊ ယနေ့နောင် ကာလ”ဟူ၍ (ဟေဗြဲ ၁၃း၈) ၌ ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ကိုယ်တော်သည် ထိုသို့အစဉ် ဖြစ်တော်မူ၏။ နောင်လည်း ထို့အတူ ဖြစ်တော်မူမည်။ “သူသည် အဖေဖြစ်တော်မူမည်” မည်သို့ ထိုသို့ဖြစ်လာမည်နည်း၊ တစ်ကမ္ဘာလုံး၏ အဖ ဖြစ်တော်မူ၏။ ရွေးနှုတ် ကယ်တင်သောအဖ နောက်ဆုံးသောအာဒံဖြစ်တော်မူ၏။ ပထမအာဒံကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျိန်ခြင်းမင်္ဂလာသက်ရောက်ခဲ့၏။ အာဒံသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အဖ ဖြစ်တော်မူသည်။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၌ အသက်ရှင်ရကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အဖသည် ခရစ်တော်ဖြစ်၏။ ကိုယ်တော်သည် သူ့လူတို့၏ အဖ ဖြစ်တော်မူ၏။ အာဒံမူကား ကျွန်ုပ်တို့၏ “ထာ၀ရအဘ” မဟုတ်ချေ။ ယေရှုသည် ပဋိညာဉ်ဘုရားသခင်၏ အဖဖြစ်တော်မူ၏။ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ရွေးနှုတ်ခံရသော သူတို့အားလုံး၏အဖ ခရစ်ယာန်တိုင်း၏ အဘသည် ယေရှုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးနေမည်ဆိုလျှင်၊ သင်သည် အာဒံ၏သား ဖြစ်နေသေးသည်။ ယေရှုခရစ်တော်၏ရွေးနုတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုသင်ခံစားရမည်ဆိုလျှင်ယေရှုသည်သင်၏”ထာ၀ရအဘ”ကယ်တင်အရှင်ဖြစ်တော်မူမည်။
ယေရှုသည်ဗက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့စဉ်က ကောင်းကင်တမန်တို့သည် သိုးထိန်းများ ထံတွင်ထင်ရှားတော်မူပြီး မိန့်တော်မူသည်မှာ၊
“ကောင်းကင်ဘဝဂ်ဝယ်ဘုန်းကြီးတော်မူစေသတည်း။မြေကြီးပေါ်၌လည်း ငြိမ်သက်ခြင်င်းရှိစသတည်း။လူတို့အားမေတ္တာ၊ဂရုဏာရိုစေသတည်း။” (လုကာ၂း၁၄)။
ယေရှုသည် ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးဖို့ရန်ကြွဆင်းလာခဲ့ပါသည်။ ကိုယ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်ငြိမ်သက်ချမ်းသာခြင်းရှိကြသည်။သမ္မာကျမ်းစာတော်၌မိန့်တော်မူသည်ကား”ငါတို့သခင်ယေရူခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းကို ခံစားကြ၏” (ရောမ ၅ ;၁ ) ။ထိုအတွက်ကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပြီးဘုရားသခင်နှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့ရန် ယေရှုဘုရား ကားတိုင်ပေါ် အသေခံတော်မူခဲ့ပါသည်။ ကိုယ်တော်သည် “လက်ဝါး ကားတိုင်မှာ သွန်းလောင်းတော် မူသော အသွေးတော်အားဖြင့် ရန်ကိုငြိမ်း၍” ( ကောလော ၁ ;၂၀ )
ကိုယ်တော်သည် မိုးတိမ်ကို စီး၍ဆင်းသက်ကြွတော်မူသောအခါ ၊” ငြိမ်သက် ခြင်း၏အရှင်” ဖြစ်တော်မူသဖြင့် ဤလောက၌ငြိမ်သက်ခြင်းကို ပေးတော် သနား တော်မူမည်။ ထိုအခါတွင် ကိုယ်တော်သည် “လူမျိုးအသီးသီးတို့အား တရားစီရင်၍၊ များပြားသောလူတို့ကိုဆုံမတော်မူသဖြင့်၊သူတို့ဓားလက်များကိုထွန်သွားဖြစ်စေခြင်းငှါ၎င်းလှံများကိုတံစဉ်းဖြစ်စေခြင်း၎င်း ထုလုပ်ကြလိမ့်မည်။ “တစ်ပြည်ကိုတစ်ပြည် စစ်မတိုက်၊ စစ်အတတ်ကိုလည်းနောက်တဖန်မသင်ရကြ”(ဟေရှာ၂း၄)
“အကြောင်းမူကာ၊ ငါတို့အဖို့သူငယ်ကိုဘွားမြင်၏။ငါတို့အား သားကို သနားတော်မူ၏။ထိုသူသည်အုပ်စိုးခြင်း အာဏာစက်ရှိလိမ့်မည်။ နာမ တော်မူကားအံ့ဩဖွယ်၊ တိုင်ပင်ဘက်၊တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်၊ ထာ၀ရ အဘ၊ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကို ခံတော်မူ လိမ့်မည်။” (ဟေရှာ၉း၆)
ယနေ့ည၊မိတ်ဆွေယေရှုဘုရားကိုယုံကြည်ကိုးစားလာဖို့ ကျွန်ုပ်ဆုတောင်း ပေးပါ သည်။ ဖေါ်ပြပါအံ့ဩဖွယ်နာမတော်များအားဖြင့် သင့်အဖို့ ကိုယ်တော်ကြီးသော အမှုကို ပြုနိုင်၏။သင့်အား ရွေးနုတ်ကယ်တင်တော်မူပြီး ကောင်းကင်ဘုန်းတန်ခိုးကို ပေးစွမ်း နိုင်တော် မူ၏။ အသွေးတော်အားဖြင့် သင့်တို့အား သန့်ရှင်းစေနိုင်၏။ အသွေးတော်ဖြင့် ကျွန်ုပ်အား ကျေးဇူးပြုတော်မူ၏ အာမင်။ နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန် မိန့်တော်မူသည်ကား
“ဤလောက၏အပြစ်ကိုဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်ကို ကြည့်လော့” (ယောဟန်၁း၂၉)
ယေရှုဘုရားသခင်၏ရွေးနုတ်ခြင်း ကျေးဇူးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မိတ်ဆွေ၊ ဒေါက်တာ ဘေကန်နှင့် သော်၎င်း ကျွန်ုပ်နှင့်သော်၎င်း ဆွေးနွေးလိုပါသလား၊အကယ်၍ ဆွေးနွေး လိုပါလျင် ဤအခန်းထဲက ယခုထွက်ပြီး ဆွေးနွေးခန်းထဲသို့ လျောက်လိုက်ပါ။ ဒေါက် တာချန်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ အဖို့ဆုတောင်းပေးပါ။
-	တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာကျူဒေါင်လီမှ ရှင်မဿဲ ၁း၁၈-၂၅ ကို ဖတ်ကြားပေးပါသည်။
-	တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ်ဂရိတ်ဖစ်မှ (၁၈၃၇- ၁၈၉၈ ခုနှစ်၊ ဝီလ်လျှံစီ.ဒိစ် သီကုံးရေးသားသော “အံ့ဖွယ်သူငယ်တော်” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေးပါသည်။